चार लाखको २५ लाख तिर्दा पनि जग्गा फिर्ता भएन, उल्टै बलात्कारको शिकार - Action Khabar - Nepali Online News Portal
चार लाखको २५ लाख तिर्दा पनि जग्गा फिर्ता भएन, उल्टै बलात्कारको शिकार
सप्तरी । सप्तरीको बोदेबर्साइन नगरपालिका ५ का मोहम्मद तैयब अलीले बि.स.२०७१ भदौ २ गते तत्कालिन मानराज गाविस र खोजपुर गरी ९ कित्ता १ विघा, ८ कठ्ठा, साँढे ९ धुर जग्गा स्थानीय साहुकार रामदेव साहलाई धितो पास गरी ३६ लाख रूपैयाँ लिएका थिए । उक्त रकमको हालसम्म पटक–पटक गरी ८१ लाख भुक्तानी गरिसके पनि साहुले धितो फिर्ता नगर्दा ‘घरको न घाटको’ भएका छन् ।
‘२ लाख ५० छोरीको विहे गर्न, २० हजार सापटी, ३६ लाख जग्गा किन्न भनेर ऊ सँग पैसा लिएको थिँए । त्यसबापत मैले जग्गा धितो पास गरिदिएको थिएँ । पटक–पटक गरेर उसलाई ८१ लाख तिरिसक्दा पनि जग्गा फिर्ता पाइन ।’ पिडीत तैयब अलीले भने ।
गाउँमा मिटरब्याज लगाएर गरिब किसानको सम्पत्ति हडप्ने साहुकार भनिने रामदेव साहबाट जग्गा फिर्ता लिन विभिन्न समयमा हारगुहार गर्दापनि पिडीत तैयबले न्याय त पाउन सकेका छैनन् । ८१ लाख बुझाई सक्दा पनि अझै १ करोड बढि बुझाउनु पर्ने साहुकारले माग गरेपछि ‘घरको न घाटको’ भएका हुन् ।
साहुकार रामदेव साहबाट जग्गा फिर्ता लिन अनेक प्रयास गर्दा नसकेको उनको भनाई छ । ‘म जस्ता धेरैको जग्गा कब्जा गरेर अरुलाई बेचेको रहेछ । सबैले सोधखोज गर्न थालेपछि ठाउँ सर्दै बसेको छ । मलाई धरान, झुम्का धेरैपल्ट बोलायो तर, जग्गा फिर्ता दिने कुरै गरेर उल्टै अब १ करोड दिनुपर्छ भनिरहेको छ । उसको धरानमा वीपी हस्पिटल अगाडी टाटा मेडिकल पसल छ ।’ तैयब अली भन्छन् ।
बोदेबर्साइन नगरपालिका ५ का मदनलाल साहले पनि बि.स. २०७६ कार्तिक ७ गते जग्गा किन्न तथा घरखर्च चलाउन भनेर उनै साहुकार भनिने रामदेव साहबाट १२ कठ्ठा १७ धुर जग्गा धितो राखेर १२ लाख ऋण लिएका थिए । दुइ वर्षको अवधिमा उनले साहुलाई मात्र २५ लाख तिरिसकेका छन् । तैपनि साहुकार भनिने रामदेवले उनको जग्गा फिर्ता दिएका छैनन् ।
साहुकार रामदेव साहले झुटो कपाली तमसुक बनाएर चक्रवर्ती रूपमा साउँब्याज जोडेर ऋण नतिरेको भन्दै मदनलाल साह विरुद्ध लेनदेन मुद्दा हालिदिने धम्की दिइरहेका छन् । पिडीत मदनलालले आफनो जग्गा फिर्ता गर्न भनेर २०७७ साल जेष्ठ ५ गते यता पटक–पटक साहुलाई अनुनय–विनय गर्दा उल्टै साउँ व्याज नतिरेको भन्दै मुद्दा हालिदिने धम्की दिएको जिकिर गरे । ‘मैले कर्जा लिएको भन्दा धेरै पैसा तिरिसकेको छु, साहुले भने अझै कर्जा र साउँ तिर्न बाँकी छ भन्दै मेरो जग्गा फिर्ता दिन मानिरहेका छैनन् ।’ मदनलाल भन्छन् ।
सप्तरीका बोदेबर्साइन, शम्भुनाथ, सुरूङ्गा, खड्ग नगरपालिकाका दर्जनौं गरिब किसानहरू साहुकार रामदेव साहका फन्दामा परेका छन् । साहुकार रामदेवले मात्रै सो स्थानका दर्जनौं किसानलाई उठिबास लगाएका छन् । साहुकार साहको चक्रवर्ती व्याजबाट पिडीत भएका २१ जना अहिले घरबार जोगाउनकै लागि हारगुहार गरिरहेका छन् । भने, अन्य गरिब किसानहरुको पनि उठिबास हुने अवस्था भएको छ ।
४ लाखको २५ लाख तिर्दा उल्टै बलात्कार
शम्भुनाथ नगरपालिका कठौनाकि ललिता मण्डलको त साहुकार साहले सर्वस्व नै लुटिदिए् । ललिताले ४ बर्षअघि उनै साहुकार रामदेवबाट १५ कठ्ठा जग्गा किन्न र घर खर्च चलाउन ४ लाख रुपैयाँ ऋण लिएकि थिइन् । त्यसको अहिलेसम्म साउँ व्याज वापत रामदेवलाई २५ लाख रुपैयाँ तिरिसकेको भएपनि धितो राखेको जग्गा पाएकी छैनन् । बरू उल्टै बलात्कारको शिकार भइन् । ‘जग्गा किन्न लिएको कर्जा तिरिसकेकि छु, साउँ व्याजको भन्दा धेरै पैसा तिरेपनि जग्गा फिर्ता पाइन । उसले घरको काम गर्न गएको बेला जग्गा फिर्ता दिन्छु भनेर बलात्कार गर्यो ।’ ललिता भन्छिन् । श्रीमानले १० वर्ष मलेसिया बसेर कमाएको सबै पैसा साहुकारबाट जग्गा उकास्न तिर्न खर्च भएको भन्दै रूदै ललिताले सुनाइन् । अहिले साहुकार साहले ३२ लाख तिर्नुपर्ने बताउँदै ललिताको घर परिवारलाई पटक–पटक धम्क्याइरहेका छन् ।
ललिताका अनुसार २ बर्षअघि साहुकार शाहले राजबिराज घरमा काम गर्न राखेको बेलामा बलात्कार बलात्कार गरेका हुन् । ‘म साहुको घरमा काम गर्न बसेको थिएँ । जग्गा फिर्ता गरिदिने भन्दै म माथि जवरजस्ती गरे । योबारे कसैलाई भने श्रीमान र बच्चालाई समेत मारिदिने धम्की दिए ।’ उनले भनिन् । साहुकार साहका २ श्रीमति छन् ।
ललिताका श्रीमान बिनोद मण्डलले आफु बिदेशबाट फर्केर आएपछि साहुको मुनसी (लेखनदास) लाई पटक–पटक जग्गा फिर्ता गर्न अनुरोध गरेपनि अटेर गरेको बताए ।
ललिताकै छिमेकी रामप्रसाद खत्बेले पनि घरखर्चका लागि साहुकारबाट १२ लाख ऋण लिँदा जग्गा धितो पास गरिदिएका छन् । शम्भुनाथ नगरपालिका वडा नं ११ का देव सुनैर खङगले पनि २०७५ सालमा ८० हजार ऋणका लागि साहुकार रामदेवलाई २ कठ्ठा ३ धुर जग्गा धितो पास गरिदिएका थिए । सो बापत अहिलेसम्म साहुकारलाई २ लाख ८० हजार तिरिसकेको भएपनि जग्गा फिर्ता पाएका छैनन् ।
सप्तरी सुरुङ्गा नगरपालिका ६ का गुलाबचन्द साहले ४ वर्षअघि साहुकार रामदेव साहबाट ८ लाख रुपैंया कर्जा लिँदा सप्तरीको हाइवेमा पर्ने १ कठ्ठा साँढे १४ धुर र १२ कठ्ठा साँढे १२ धुर जग्गा धितो पास गरेर दिएका थिए । सो वापत उनले २४ लाख रुपैंया साहुलाई बुझाइसकेपनि आफ्नो जग्गा फिर्ता पाएका छैनन् ।
छोरा नथुनी साहले समेत साहुकार रामदेवलाई राजविराजमा भेट गर्दा जग्गा फिर्ता गर्न आग्रह गर्दा साहुले उक्त जग्गा बैंकमा धितो राखेकोले १ महिना पछि फिर्ता पास गर्दिन्छु भनेका थिए । तर, ४ वर्षयता साहुले जग्गा फिर्ता दिनुको सट्टा अहिले उल्टै ९० लाख लिएर आउनु भनेर धम्क्याइरहेका छन् । ‘बुबाले साहुबाट जति पैसा लिनुभयो त्यसको धेरै गुणा तिरिसक्नु भयो । कर्जा चुक्ता भएपछि जग्गा फिर्ताका लागि पटकपटक अनुरोध गर्दा उसले १ महिना पछि, १५ दिन पछि पास गर्छु भनेको नै ४ वर्ष वितिसक्यो । अहिले आएर ९० लाख लिएर आउनु अनीमात्र जग्गा पास गर्दिन्छु भन्छ ।’ साहुले कर्जा दिँदा सुरुमै घरजग्गा रजिष्ट्रेशन पास गराउने गरेकाले समस्या भएको बताए ।
उनीसँग पैसा तिरेको रसिद समेत छैन । तर, साहुकार रामदेव साहले डायरीमा पैसा बुझेको हिसाब राखेको जिकिर गरे । ‘कर्जा लिएको कागज बनाएपनि पैसा तिरेको कुनै कागजात दिएको छैन । उसको मुन्सीले डायरीमा कहिले कति पैसा तिरेको लेखेर राखेको छ ।’ नथुनी साह भन्छन् ।
बोदेबर्साइन ९ का सितल यादवले १६ कठ्ठा जग्गा धितो राखेर घरबनाउन र छोरालाई विदेश पठाउन साहुकार रामदेवबाटै ८ लाख र ७ लाख ऋण लिएका थिए । अहिले साहुकारले उनलाई पनि घरको न घाटको बनाइदिएका छन् । पटक–पटक साउँ व्याज गरेर लाखौं रकम तिरिसके जग्गा फिर्ता पाएका छैनन् ।
खड्ग नगरपालिका ६ का छेदीलाल पासवानको समस्या झनै कहालीलाग्दो छ । इट्टाभट्टा खोल्न भनेर २ रूपैंयाको व्याजमा ०७३ असार २२ गते, असोज २८ गते र कार्तिक २४ गते गरी कुल १६ लाख साहुकार रामदेवबाट ऋण लिएका थिए । त्यसवापत उनले पूर्वपश्चिम राजमार्गको ४ कठ्ठा १९ धुर र उदयपुर गाइघाटको ८ कठ्ठा जग्गा जग्गा धितो राखेका थिए । त्यसको साउँ ब्याज तिर्न भनेर साहुकार साहकोमा जाँदा १६ लाख कर्जाको मुन्सीले साउँ व्याज गरी ७६ लाख ६२ हजार ३९० रूपैया तिर्नुपर्ने देखाइदिए ।
‘१६ लाखको साउँ ब्याज कसरी यत्रो भयो भनेर सोध्दा राम्रो जवाफ पाउँदिन । पैसा तिरेर जग्गा उकास्छु भन्दा साहुसँग भेटै हुन दिएको छैन ।’ पासवानले पटक–पटक साहुलाई भेट गर्न जाँदा कहिले विराटनगर, कहिले धरान भन्दै हिँडेको बताए । उनले १६ लाखको साँवा व्याज गर्दै अहिलेसम्म ३६ लाख बुझाइसकेको बताए ।
साहुकार रामदेव साहको चक्रवर्ती व्याजबाट पिडीत हुनेहरूको संख्या दर्जनौं छ । शम्भुनाथ नगरपालिका १२ का ध्रुवनारायाण साह, वडा नं ९ का बिरेन्द्र यादव, वडा नं ३ का रमाकान्त चौधरी, खडग नगरपालिकाका ८ का बच्चालाल साह, सुरुङ्गा नगरपालिकाका ४ सबुर चौधरी, बोधेबर्साइन ५ का रामप्रसाद खत्वे, रुपनीका अर्बिन्द साह, मोहम्मद सौदागर, सतदेव पौदार, मोहम्मद सागर हुसैन, मोहम्मद असलम राजीन मानराजा, हरेराम साह, सितल साहको जग्गा जमिन साहुकार रामदेव साहले पैसा असुल गरेपनि फिर्ता गरिदिएका छैनन् ।
सप्तरी तथा तराईका धेरै गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूमा यस्ता साहुहरू रहेका छन् जसले सोझा–साझा गाउँलेलाई चक्रवर्ती व्याजमा पैसा लगाएर उठिबास लगाएका छन् । सप्तरी, सिराहा, बारा, पर्सा, रौतहट लगायतका तराईका जिल्लाहरूमा चक्रवर्ती व्याजको कारोबार वर्षाैंदेखि चलिरहेको छ ।
नेपालको कानुनमा वार्षिक १० प्रतिशत भन्दा बढी व्याज लिन नपाउने उल्लेख छ । तर, सप्तरीका यी साहुकारले कानुनको धज्जी उडाउँदै गाउँघरमा अशिक्षित, कमजोर अवस्था भएका परिवारलाई चक्रवती व्याजमा पैसा लगाउँदै उठिबास गराइरहेका छन् । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को परिच्छेद १५ लेनदेन व्यवहार सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा २ को उपदफा १ मा साहुले ऋणीबाट लिन पाउने व्याजको रकम साँवा रकमको वार्षिक १० प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन भनि उल्लेख गरेको छ ।
बोधेबर्साइन नगरपालिकाका मेयर आतेश कुमार सिंह यादवले गाउँघरमा चक्रवर्ती ब्याज लगाउने गरेको गुनासो भएपनि लिखित उजुरी नआएकाले कुनै कारवाही गर्न नसकिएको बताए । नगरपालिकामा न्यायिक समिति रहेको र कसैले उजुरी गरे अधिकारले भ्याएसम्म पिडीतलाई न्याय दिलाउन प्रयास गर्ने बताए ।
यता बोधेबर्साइन नगरपालिका वडा नं. ५ का वडाध्यक्ष मैजबुल रहमानले आफ्नो वडामा कतैपनि यस्तो घटना नघटेको जिकीर गरे । ‘त्यो मान्छे (साहुकार) यहाँको हैन । वडामा कसैको पनि जग्गा कब्जा गरेको छैन । अरु नगरपालिकाहरुमा गरेको होला ।’ उनले भने । ‘५ नम्बर वडाकै तैयब अलीको जग्गा कब्जा गरेको रहेछ नी ?’ भन्ने प्रश्नमा वडाध्यक्ष रहमानले आफ्नो वडामा तैयब अली नाम गरेको मान्छे नै नभएको जिकीर गरे ।
साहुकार रामदेवले याे विषयमा कुनै गर्न चाहेनन् । ‘तपाइले सम्पर्क गर्नुभयाे त्यसका लागि धन्यवाद, कुनै दिन भेटेरै गफ गरूला ।’ साहुकार रामदेवले एक्सन खबरले सम्पर्क गर्दा माेवाइलमा भने । त्यसपछि पुनः कल गर्दा उनकाे माेवाइल स्विचअफ देखियाे ।
गत सोमबार बोदेबर्साइन ९ स्थित धर्मशालामा भेला भएका पिडीतहरूले संघर्ष समिति खडा गरी न्यायका लागी कानुनी ढोका ढक्ढक्याउने बताएका छन् । तर, गरिब किसानहरूको घरजग्गा हडप्दै उठिबास लगाउन सक्रिय रामदेव साहलाई प्रहरी प्रशासनले हतकडी नलगाएसम्म पिडीतले न्याय पाउन सक्ने अवस्था देखिएको छैन ।
- २९ भाद्र २०७८, मंगलवार १२:३८ मा प्रकाशित